မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge သည်စာအုပ်ဖတ်သူသာမက browser တစ်ခုလည်းဖြစ်လိမ့်မည် eReaders အားလုံး
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge သည် ebook ဖတ်စက်သာမက browser တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်
Joaquín Garcia က | | eBooks, NOTICIAS, Software များ
၀ င်းဒိုး ၁၀ အသုံးပြုသူများ၏တိုင်ကြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာထိုအရာဖြစ်သည် ebooks ဖတ်ရန်အတွက် Windows တွင်ကောင်းသောနှင့်အခမဲ့ app များသို့မဟုတ် application များမရှိသလောက်ပင်အထူးသဖြင့် epub ပုံစံဖြင့်အခမဲ့ ebook များဖတ်ရန်။ ၎င်းကိုစီးပွားဖြစ် application အချို့သို့မဟုတ်လူကြိုက်များသောအခမဲ့ ebook မန်နေဂျာ Caliber ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။
သို့သော်၎င်းသည်နာရီကိုရေတွက်ရန်ပုံရသည်။ သင့်အနေဖြင့်သင်၏ web browser အသစ်သည် browser တစ်ခုထက်မကကြောင်း Microsoft မှသတင်းပို့သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခြင်း, အနာဂတ် system ကို update များနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များရှိလိမ့်မည် ebook reader သည်သင်ပထမ ဦး ဆုံးရရှိသော function ကိုလုပ်ဆောင်သည်.
အရှင်, Microsoft Edge သည် Windows 10 အတွက်အခမဲ့ Epub ebook reader ဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်လူအများအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများစွာရှိပြီးဖြစ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ pdf ဖိုင်များဖတ်ခြင်းဖြင့်လူတိုင်းလုပ်သောအရာ၊ ebooks များဖတ်ခြင်း၊ add-ons သို့မဟုတ် plugins များကိုသုံးခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ သို့သော် Microsoft Edge သည်ပထမဆုံးဖြစ်သည် ဇာတိဒီ function ကိုထောကျပံ့ဖို့.
Microsoft Edge သည် ebooks များကို DRM မရှိဘဲဖတ်နိုင်လိမ့်မည်
သို့သော်ထိုမျှမက။ Microsoft Edge သည် Epub ဖိုင်ကိုဖတ်လိမ့်မည် လက်ရှိ eReaders နှင့် Android တက်ဘလက်များတွင်အသုံးပြုသော ebook reader ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းဖြင့်ဖတ်နိုင်ပြီး၊ အမှတ်အသားများကိုထည့်နိုင်သည်၊ ဖောင့်၊ အရွယ်အစားနှင့်စသည်တို့ကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဒီ function Windows 10 အသုံးပြုသူများသည်မတ်လအထိရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ၀ င်းဒိုး ၁၀ မွမ်းမံမှုကြီးဖြန့်ချိမည့်လ၊ သို့သော်မြန်မြန်လက်စွပ်ကိုအသုံးပြုသူများသည်နောင်လာမည့်နေ့များတွင်၎င်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Android, Linux, iOS နှင့်အခြား operating system များအတွက် ebooks ဖတ်ရန် application များစွာရှိသည်။ သို့သော် Windows 10 နှင့်၎င်း၏ tablet များအတွက်သိပ်မများလှ။ အခုအခြေအနေကဒီအသစ်အဆန်းနဲ့ပိုကောင်းတယ် ထို့ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ browser များစွာသည်ဤအသစ်အဆန်းကိုတုပရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများပိုမိုရရှိမည့် epub ဖိုင်များ၏စာဖတ်ခြင်းကိုပါထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge သည် ebook ဖတ်စက်သာမက browser တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်
Adobe Acrobat Reader မှလည်းကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဒီဂျစ်တယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်